Reptiles – Myanmar Biodiversity
Tortoises Four species of tortoises are known to occur in Myanmar: Geochelone platynota, Manouria emys, Manouria impressa, and Indotestudo elongata. Of these, all are threatened to some extent byacombination of subsistence and commercial harvesting, over-collection for the pet trade, and toalesser extent, habitat destruction. Conversion of natural vegetation to agricultural land [...]
မွေးမြူရေးခြံထဲတွင် ပေါက်လာသော ၅ နှစ်သားအရွယ် ကြယ်လိပ်ကလေးများကို သူတို့ရဲ့ကြောပေါ်မှာ စက်တပ်ပြီး ဘဘာဝအတိုင်း တောထဲကို ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ “လိပ်ဥဘ၀ထဲက အကောင်ပေါက်တဲ့အထိ စောင့်ကြည့်ပြီး ၁မိနစ်သားထဲကစလို့ အစာကျွေးပြုစုလာခဲ့တာဆိုတော့ သဘာဝတောထဲမှာ ရုတ်တရက် မနေတတ်မှာ စိတ်ပူလို့ ၂ ဧကခွဲ ရှိတဲ့ခြံကြီးတွေ တောထဲမှာသွားဆောက်ပြီး တစ်ခြံကို ကြယ်လိပ် အကောင် ၅၀ စီထည့် ၊ ပေ ၄၀/၅၀ အကွာကနေ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်” ဟု သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ်)နှင့် လိပ်မျိုးဆက်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာ ကလျာက ဆိုပါတယ်။ ထိုနောက် ဒေါက်တာ ကလျာမှ Soft Release နှင့် Self Release အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ‘’Soft Release လိပ်ကလေးတွေက [...]
မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တော အတွင်းတွင် ကျင်းပသော (တတိယအကြိမ် ) မြောက် ကြယ်လိပ်အကောင်(၃၀၀) အား သဘာဝတောအတွင်းသို့ ဘေးမဲ့ စေလွှတ်ခြင်း မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တော အတွင်းတွင် သဘာဝတောအတွင်းနေ ကြယ်လိပ်ကောင်ရေ ပြန်လည် တိုးပွား လာစေမည့် အစီအစဉ်အား ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၈)ရက် ၂၀၁၇ တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၈)ရက် ၂၀၁၇ တွင် မင်းစုံတောင်ဘေးမဲ့တော ကြယ်လိပ်မွေးခြံ အတွင်းမှ ပေါက်ပွါး လာသော အရွယ်မရောက် သေးသော (Sub-adult ) ၃နှစ်သားမှ ၅ နှစ်သားများ ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ ကြယ်လိပ် (Burmese Star Tortoise: Geochelone platynota) အကောင်(၃၀၀) အား မင်းစုံတောင် ဘေးမဲ့ [...]